Ny fifandraisana dia ny fahatsapana tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao. Rehefa eo am-piarahana ianao dia tianao ny vadinao; avy eo, tokony hampiseho ny fitiavanao azy ianao. Amin'ny ankabeazan'ny fotoana dia tsy fantatsika fa ny fanehoana fitiavana dia zava-dehibe toy ny fitiavana. Ny fitiavana dia andry iray amin'ny fifandraisana rehetra, izay manome tanjaka ho azy.
Misy fomba samihafa hanehoana ny fitiavanao toa ny fanomezana voninkazo, akanjo teddy bear ary entana isan-karazany. Ambonin'izy ireo, ny akanjo rehetra mifanaraka amin'ny mpivady dia mety ho fanomezana tsara indrindra satria ny akanjo dia azo tehirizina mandritra ny fotoana maharitra. Azonao atao ny manamboatra azy ireoakanjo mifanentana ho an'ny olon-tianao amin'ny fotoana samihafa. Eto isika dia hiresaka hevitra telo ho an'ny akanjo roa araky ny hetsika hafa.
1. Ho an'ny sary alohan'ny fampakaram-bady.
Ny fampakaram-bady no toky matanjaka indrindra eto amin'izao tontolo izao. Miandry fatratra ny andro mariazy ny tsirairay ary te hankalaza ny androny feno. Ho an'ny fampakaram-bady dia manana fombafomba samihafa isika alohan'ny sy aorian'ny andro fampakaram-bady. Ny photoshoot prewedding dia asa iray izay tena ilaina toy ny photoshoot fampakaram-bady. Ity fakana sary ity dia misambotra ny fahatsapana sy ny fifalianao alohan'ny fisakafoanana, ary ny akanjo mifanentana dia hanampy betsaka amin'ireo fahatsapana sy fahasambarana ireo. Afaka mitafy akanjo mitovy amin'izany ianao, ny iray misy ny teny hoe "Mr" ary ny iray manana ny teny hoe "Ramatoa" Satria fahatsiarovana mandrakizay ireo photoshoots ireo, dia hampifaly sy hahafaly an'ireo fahatsiarovana ireo ny akanjo fitoviana.
2.Ho an'ny sakafo hariva daty.
Ho an'ny mpifankatia, ny daty dia fomba mahafinaritra hahafinaritra ny fiaraha-miasan'ny tsirairay. Manome fotoana ho an'ny mpivady izany. Manome azy ireo fahafantarana izany ny safidin'ny tsirairay sy ny tiany.
Ny akanjo fampifanarahana dia mety mitana andraikitra lehibe amin'ny alin'ny daty ifandraisanao satria azonao atao ny mampita ny fahatsapana fitiavana amin'ny alalan'ireto akanjo namboarina ireto. Ireo akanjo ireo dia miteraka fifamatorana eo amin'ny mpivady. Matetika isika dia tsy afaka maneho ny fihetseham-pontsika amin'ny teny; Amin'izao fotoana izao dia tsy afaka mampiasa afa-tsy ireo akanjo ireo isika hanehoana ny fihetsem-pontsika.
3.Ho an'ny fiaraha-dia.
Ny fitsangatsanganana no fialam-boly ankafizin'ny ankamaroan'ny olona. Ny ankamaroan'ny mpivady dia mahita ny hafaliany amin'ny fandehanana any amin'ny toerana samihafa. Ny fitsidihana tranonkala isan-karazany dia manome fotoana azy ireo hifaneraserana. Ny akanjo mifanentana dia afaka mameno ny diany. Ireo akanjo ireo dia manome azy ireo fahatsapana fifamatorana.
T-shirt mifanaraka, hoodies, ary akanjo dia afaka manampy amin'ny fitiavan'ny mpivady. Afaka manao an'ireny akanjo ireny amin'ny fotoana samihafa ianao.